Korea series – Categories – Alpha Premium
My Name ##unicode Neverthelessထဲက Nabiမင်းသမီးလေးနဲ့ Yumi’cells ထဲက မင်းသားရဲ့ နောက်ဆုံးအသစ်ထွက် ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် အဖေဖြစ်သူအသတ်ခံလိုက်ရတာကြောင့် လူသတ်သမားကိုရှာပြီးလက်စားချေစိတ်တွေပြင်းထန်နေတဲ့ ယွန်းဂျီဝူးဆိုတဲ့ မိန်းကလေးအကြောင်းကို ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာမြင်တွေ့ရမှာပါ ယွန်းဂျီဝူးရဲ့အဖေဟာ မှုးယစ်ဂိုဏ်းဝင်တစ်ယောက်ပါ သူ့အဖေကို ရဲတွေလိုက်ဖမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ ယွန်းဂျီဝူးတစ်ယောက် ကျောင်းမှာ အရှက်ကွဲမှု အနိုင်ကျင့်မှုတွေခံခဲ့ရပါတယ် သူ့မွေးနေ့မှာ သူ့အဖေ အိမ်ကိုပြန်လာတုန်း လူသတ်သမားက ဓားနဲ့ထိုးသတ်သွားခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် သက်သေမရှိတာကြောင့် အမှုပိတ်သွားခဲ့ပါတယ် လူသတ်သမားကိုရှာချင်စိတ်ပြင်းပြနေတဲ့ ယွန်းဂျီဝူးဟာ သူ့အဖေအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ မှုးယစ်ဆေးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ချွဲမူဂျင်နဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ မှုးယစ်ဆေးဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ လူသတ်သမားကိုင်တဲ့လက်နက်ဟာ ရဲကိုင်တဲ့သေနတ်ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့အခါ ယွန်းဂျီဝူးဟာ အိုဟယ်ဂျင်အဖြစ် ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး လူသတ်သမားကိုရှာဖွေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် အဖေ့ကိုသတ်သွားတဲ့လူသတ်သမားကို သူဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ ဘယ်လိုကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်း လှည့်ကွက်တွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ ကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi Neverthelessထဲက Nabiမင္းသမီးေလးနဲ႔ Yumi’cells ထဲက မင္းသားရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအသစ္ထြက္ ၾကည့္လို႔ေကာင္းမယ့္ အက္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ အေဖျဖစ္သူအသတ္ခံလိုက္ရတာေၾကာင့္ လူသတ္သမားကိုရွာၿပီးလက္စားေခ်စိတ္ေတြျပင္းထန္ေနတဲ့ ယြန္းဂ်ီဝူးဆိုတဲ့ မိန္းကေလးအေၾကာင္းကို ဒီဇာတ္လမ္းတြဲမွာျမင္ေတြ႕ရမွာပါ ယြန္းဂ်ီဝူးရဲ႕အေဖဟာ မႈးယစ္ဂိုဏ္းဝင္တစ္ေယာက္ပါ သူ႔အေဖကို ရဲေတြလိုက္ဖမ္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ယြန္းဂ်ီဝူးတစ္ေယာက္ ေက်ာင္းမွာ အရွက္ကြဲမႈ အႏိုင္က်င့္မႈေတြခံခဲ့ရပါတယ္ သူ႔ေမြးေန႔မွာ သူ႔အေဖ အိမ္ကိုျပန္လာတုန္း လူသတ္သမားက ဓားနဲ႔ထိုးသတ္သြားခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ သက္ေသမရွိတာေၾကာင့္ ...
TMDb: 9.5/10 10 votes
The Veil ##unicode The Veil ဇာတ်ကားကတော့ နာမည်ကြီးမင်းသား Namkoong Min ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းကလဲ2018ခုနှစ်တုန်းက MBC Drama Screenplayဆုကိုရရှိထားတာမို့ ချွင်းချက်မရှိကောင်းမွန်တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဆေးရေးမှာ သေဆုံးသွားပြီလို့ထင်ထားတဲ့ NISအေးဂျင့် Han jihyeokဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာတဲ့ သင်္ဘောပေါ်မှာ အသက်ရှင်လျက်ပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ကံမကောင်းချင်တော့ အေးဂျင့် Han jihyeokဟာ လွန်ခဲ့တဲ့၁နှစ် သူပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကို မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ NISက အေးဂျင့် Han jihyeokနောက်ဆုံးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ စစ်ဆင်ရေးက အေးဂျင့်၂ယောက်သတ်မှုမှာ အေးဂျင့် Han jihyeokပါဝင်ပတ်သတ်နေတယ်လို့ သံသယရှိနေခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့၁နှစ်က စစ်ဆင်ရေးမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကို အေးဂျင့် Han jihyeokတစ်ယောက်ပြန်မှတ်မိပါ့မလား။ အဲ့စစ်ဆင်ရေးမှာ အေးဂျင့်တွေသေဆုံးခဲ့တာက ဘယ်သူရဲ့လက်ချက်လဲ။ သစ္စာဖောက်မှုတွေနဲ့အတူ Action sceneခပ်မိုက်မိုက်‌တွေပါဝင်တာမို့ ကြည်ရူကြပါအုံး။ ##zawgyi The Veil ဇာတ္ကားကေတာ့ နာမည္ႀကီးမင္းသား Namkoong Min ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဇာတ္ကားတစ္ကားျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္ၫႊန္းကလဲ2018ခုႏွစ္တုန္းက MBC Drama Screenplayဆုကိုရရွိထားတာမို႔ ခြၽင္းခ်က္မရွိေကာင္းမြန္တဲ့ကားျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးေရးမွာ ေသဆုံးသြားၿပီလို႔ထင္ထားတဲ့ NISေအးဂ်င့္ Han jihyeokဟာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံကိုခိုး၀င္လာတဲ့ သေဘၤာေပၚမွာ အသက္ရွင္လ်က္ျပန္ေပၚလာခဲ့တယ္။ကံမေကာင္းခ်င္ေတာ့ ေအးဂ်င့္ Han ...
Start-Up Seo Dal Miဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ အိပ်မက်မက်နေတဲ့သူပါ။ လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေရဖို့ ကျောင်းကနေထွက်ခဲ့ပြီး အချိန်ပိုင်းအလုပ်မျိုးစုံလုပ်ကာ အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမရဲ့အကြီးမားဆုံးအိပ်မက်ကတော့ ကိုရီးယားရဲ့စတိဗ်ဂျော့အဖြစ်နဲ့ အောင်မြင်တဲ့စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သူပါ။ Nam Do Sanကတော့ အတွက်အချက်တော်တဲ့ သင်္ချာဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Samsan Techရဲ့ တည်ထောင်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကံမကောင်းစွာနဲ့ သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာအကျဥ်းအကြပ်ထဲကျရောက်နေပြီး စီးပွားရေးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ဒီလိုရည်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့လူငယ်လေးနှစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လိုတွေဆုံကြမလဲ… သူတို့အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါ့မလား.. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရော အပြန်အလှန်ကူညီနိုင်ကြပါ့မလား…
Tale of the Nine Tailed လီယွန်ဆိုတာ အရပ်ရှည်ရှည် နဲ့ ထီးတစ်ချောင်းကို ကိုင်ရင်း လျှောက်သွားနေတဲ့သူတစ်ယောက်…. ဒီထီးက နယ်နယ်ရရတော့မဟုတ်ဘူး..အရေးကြီးအစွမ်းထက်တဲ့ဓားတစ်ချောင်းအဖြစ်ပြောငး်လဲနိုင်သလို သူ့ကိုလည်း စွမ်းအားပြည့်အသုံးချနိုင်ဖို့အထောက်အကူပြု လက်နက်ဖြစ်တယ်…တကယ်တော့သူဟာ လူသားတွေနဲ့မခြားနေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မြေခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်…. သူဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေနေသလို အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာလည်း အချိို့သောမြေခွေးတွေကို လိုက်သုတ်သင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်…. နမ်ဂျီအာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတော့ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ပရလောကတွေဟာ တကယ်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့ သူဖြစ်ပြီး အဲ့အကြောင်းအရာတွေကို လိုက်လံရှာဖွေပြီး တင်ဆက်နေတဲ့ရုပ်သံလိုင်းက ပီဒီတစ်ဉီးပေါ့……. လီယွန်ဆိုတဲ့မြေခွေးဟာ ဘာကိုလိုက်ရှာနေတာလဲ….ဒီလောကကြီးထဲမှာ လီယွန်လို လူသားပုံဖြစ်နေတဲ့ မြေခွေးတွေဘယ်လောက်များနေပြီလဲ…. လူသားတွေကိုရောဒုက္ခပေးနိုင်လား….. သူတို့လို မြေခွေးတွေကို နှိမ်နှင်းနေတဲ့ တခြား မိစ္ဆာကောင်တွေရောရှိနိုင်လား…. နမ်ဂျီအာဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ရော ဘယ်လိုတွေ တွေ့ဆုံကြမလဲ…. ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကက အပတ်စဉ် Wednesday, Thursday မှာ ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ (၁၆) ပိုင်းထိရှိပါတယ်….အက်ရှင်ခန်းတွေက တော်တော်မိုက်သလို သဘာဝလွန်စွမ်းအားတွေကို အသုံပြုပြီး ဗျင်းတဲ့အခန်းတွေဆိုလည်း တော်တော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်….